laacib » Markii Hore Eden Hazard, Haddana Zinedine Zidane Oo Riyada Pual Pogba Rumaynaya.
Markii Hore Eden Hazard, Haddana Zinedine Zidane Oo Riyada Pual Pogba Rumaynaya.
Real Madrid ayaa qaaday talaabo wayn oo ay kula soo wareegayso xidigo muhiim ah iyada oo Zinedine Zidane ay ka go’antahay in uu xoojin wayn u sameeyo kooxda Bernabeu ku fashilantay xili ciyaareedkan.
Real Madrid ayaa haddaba la sheegay in ay heshiis buuxa la gaadhay Eden Hazard kaas oo maalmaha soo socda la filayo in heshiiskiisa la dhamaystiri doono balse uu kooxda soo gaadhi karo marka uu soo dhamaysto finalka Europa League.
Laakiin warka kale oo soo baxay ayaa sheegaya in Real Madrid ay dalab 140 milyan yuro ah u gudbisay kooxda Man United dalabkaas oo ah mid ay maamulka United aqbali karaan maadaama oo ay markii hore dalbanayeen 160 milyan yuro.
Don Balon oo laga leeyahay dalka Spain ayaa shaaciyay in kooxaha Real Madrid iyo Man United ay meel dhexe iskugu yimaadeen oo ah 140 milyan yuro si uu Pogba ugu biiro kooxda Zidane ee Los Blancos.
Paul Pogba ayaa hore u sheegay in ay riyadiisa tahay in uu Zidand kaga hoos shaqeeyo Real Madrid waxaana bixitaankiisa Man United uu dhiiro galin uga helay aflagaadadii jamaahiirta kooxdiisa ee kadib kulankii Cardiff City.
Laakiin sidoo kale Pual Pogba ayaan xili ciyaareedka soo socda Man United ku heli kari tartanka xiisaha badan ee Champions League kaas oo isna sabab muhiim ah ka noqon kara bixitaankiisa Old Trafford.
Wargayska Don Balon ayaa sheegay in maamulka Man United ay ku faraxsan yihiin dalabka Madrid ee 140 ka milyan ah waxayna tani keeni kartaa in Zidane uu Bernabeu kuwada helo Eden Hazard iyo Pual Pogba.
Ciyaartoy badan oo hadda ka tirsan kooxda Zidane ayaa bixi doona waxaana haddaba go’aanka bixitaanka la siiyay Gareth Bale, Dani Cebalos, Vallejo iyo goolhaye Keylor Navas.
Sida ay hadda u muuqato Zidane ayaa shaqo wayn ka qabanaya suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyada oo saamayntiisa shaqsi ay aad u soo jiidanayso Eden Hazard iyo Pual Pogba balse suuqa Madrid ayaa wali sii socon doona.
Madax waynaha Real Madrid ee Florentino Perez oo arkaya qaabka liita ee ay kooxdiisu xili ciyaareedkan ugu dhamaysanayso koob la’aanta ayaa diyaar u ah in uu lacagtii ugu badnayd suuqa galiyo si uu xaalada kooxda u badalo.
Tan iyo markii uu Zidane dib ugu soo laabtay Bernabeu ee uu badalay Solari, waxaa Real Madrid lala xidhiidhinayaa ciyaartoy badan oo magac wayn balse hadda Pogba iyo Hazard ayaa u muuqda kuwa ugu horeeya ee Bernabeu soo gaadhi kara.